ပငျနယျတီသာ မပါရငျ ယခုနှဈ ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယား ဘယျလို ဖွဈနမေလဲ? – Play Maker Sports Journal
မကွာသေးမီတုနျးကလီဗာပူးနညျးပွကလော့ပျကလီဗာပူးကိုသူကိုငျတှယျတဲ့ငါးနှဈခှဲတာကာလမှာရရှိတဲ့ပငျနယျတီ အရအေတှကျထကျမနျယူရဲ့နောကျဆုံးနှဈနှဈခှဲတာကာလပငျနယျတီအရအေတှကျကမြားပွားနကွေောငျးဝဖေနျ ထောကျပွမှုပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာကတော့ပငျနယျတီကိုသာထညျ့မတှကျရငျမနျစီးတီးကတော့ရမှတျ၃မှတျပိုမိုရရှိလာမှာဖွဈပွီးအမှတျပေးဇယားထိပျသို့တကျလှမျးလာမှာဖွဈပါတယျ။အံ့ဩစရာကောငျးတာကတော့ယခုရာသီမှာပငျနယျတီ ကိုးကွိမျဖွငျ့ပငျနယျတီအမြားဆုံးရရှိထားတဲ့လကျစတာဟာပငျနယျတီကိုဖယျရှားလိုကျရငျလညျးအမှတျပေးဇယား အဆငျ့၎နရောမှာဘဲဆကျလကျရပျတညျထားနိုငျပါမယျ။
ပင်နယ်တီသာ မပါရင် ယခုနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယား ဘယ်လို ဖြစ်နေမလဲ?
မကြာသေးမီတုန်းကလီဗာပူးနည်းပြကလော့ပ်ကလီဗာပူးကိုသူကိုင်တွယ်တဲ့ငါးနှစ်ခွဲတာကာလမှာရရှိတဲ့ပင်နယ်တီ အရေအတွက်ထက်မန်ယူရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ခွဲတာကာလပင်နယ်တီအရေအတွက်ကများပြားနေကြောင်းဝေဖန် ထောက်ပြမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ပင်နယ်တီကိုသာထည့်မတွက်ရင်မန်စီးတီးကတော့ရမှတ်၃မှတ်ပိုမိုရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးအမှတ်ပေးဇယားထိပ်သို့တက်လှမ်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့ယခုရာသီမှာပင်နယ်တီ ကိုးကြိမ်ဖြင့်ပင်နယ်တီအများဆုံးရရှိထားတဲ့လက်စတာဟာပင်နယ်တီကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်လည်းအမှတ်ပေးဇယား အဆင့်၎နေရာမှာဘဲဆက်လက်ရပ်တည်ထားနိုင်ပါမယ်။